इमर्जिङ नेपाल , राष्ट्र उत्थान लघुवित्त र नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट
साताको कारोबारको पहिलो दिन आइतबार कारोबार सुरु भएको केहि बेरमै इमर्जिङ नेपाल सहित ३ कम्पनीको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ।
समाचार तयार पर्दा सम्म इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ९ दशमलव ९९ प्रतिशत वृद्धि भएसँगै सकारात्मक सर्किट लागेको हो । सकारात्मक सर्किट लागेर कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १ हजार ३ सय ४७ दशलमव २० पुगेको छ ।
अघिल्लो कारोबारको दिन कम्पनीको रू. १ हजार २ सय २४ दशलमव २० मा अन्तिम कारोबार भएको थियो। कम्पनीको शेयरमा विक्रेताभन्दा क्रेता धेरै भएकाले शेयरमूल्य बढेको हो । मार्केट डेप्थमा हेर्दा कम्पनीको शेयरमा ८९ हजार ९ सय ८० कित्ता शेयर खरीद माग रहेको छ भने विक्री माग शून्य रहेको छ ।
राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १० प्रतिशत वृद्धि भएसँगै सकारात्मक सर्किट लागेको हो । सकारात्मक सर्किट लागेर कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू.१ हजार ४ सय५१ दशमलभ ४० पुगेको छ ।
अघिल्लो कारोबारको दिन कम्पनीको रू.१ हजार ३ सय १९ दशमलभ ५० मा अन्तिम कारोबार भएको थियो। कम्पनीको शेयरमा विक्रेताभन्दा क्रेता धेरै भएकाले शेयरमूल्य बढेको हो । मार्केट डेप्थमा हेर्दा कम्पनीको शेयरमा ७२ हजार ६ सय ३३ कित्ता शेयर खरीद माग रहेको छ भने विक्री माग शून्य रहेको छ ।
नेष्डो समृद्ध लघुवित्तको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ९ दशमलव ९९ प्रतिशतले वृद्धि भएसँगै सकारात्मक सर्किट लागेको हो । सकारात्मक सर्किट लागेर कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू.१ हजार १ सय ६१ दशमलभ २० पुगेको छ ।
अघिल्लो कारोबारको दिन कम्पनीको रू.१ हजार ५५ दशमलभ ७० मा अन्तिम कारोबार भएको थियो। कम्पनीको शेयरमा विक्रेताभन्दा क्रेता धेरै भएकाले शेयरमूल्य बढेको हो । मार्केट डेप्थमा हेर्दा कम्पनीको शेयरमा १ लाख ३० हजार ९ सय २१ कित्ता शेयर खरीद माग रहेको छ भने विक्री माग शून्य रहेको छ ।
इमर्जिङ नेपाल नेष्डो समृद्ध लघुवित्त राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड